Classic Slot တှဘောလို့မပြောကျကှယျသှားတာလဲ? - Myanmar Online Game
ဒီနေ့ခေတ် Slot ကစားနည်းအသစ်တွေက အခြေခံထားကြရတဲ့ Traditional Slot Machine တွေက ပုံမှန်အတိုင်းပဲပိုပိုပြီး ရေပန်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ Classic Slot တွေက ဒီနေ့ခေတ် Modern Slot တွေလိုပဲကစားလို့ကောင်းတယ်လို့ ကစားသူတွေကပြောကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အပေါ်ယံခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် အရင်းနည်းနည်းနဲ့ အမြတ်အများကြီးပြန်ပေးနိုင်တဲ့ကစားနည်းခြင်း တူနေလို့ပါပဲတဲ့။ Traditional Slot တွေကအထူးသဖြင့်တော့ ဒီနေ့ခေတ်သစ် Slot တွေလို Feature တွေအများကြီးနဲ့ UI တွေရှုပ်နေတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုမကြိုက်ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ Nostalgic ကစားနည်းတွေကိုကြိုက်တဲ့ ကစားသူတွေအတွက်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။
Charles Fey ဆိုတဲ့လူက ပထမဆုံး Slot စက်ကို 20th ရာစုမှာစပြီးတီထွင်ခဲ့တာပါ။ ဒီ Slot မှာ Wheel3ခုပါပြီးတော့ Liberty Bell လို့နာမည်တွင်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Herbert Mills ဆိုသူက Liberty Bell လိုပဲ Slot စက်တစ်ခုကိုဖန်တီးရာမှာ သူက Symbol တွေကို အသီးပုံတွေကို သုံးခဲ့တာဖြစ်လို့ ‘Fruit Machine’ ဆိုပြီးစခေါ်လာကြပါတယ်။ အဲ့ခေတ်ထဲက Fruit Symbol တွေက Slot ကစားနည်းနဲ့တစ်ပေါင်းတစ်ပါထဲဖြစ်ပြီးတော့ ဒီနေ့ခေတ်သစ် Slot များစွာမှာလဲ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Traditional Slot တွေက Land-based Casino တွေ၊ Galleries တွေ၊ Cafe တွေကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့် ဒီနေ့ခေတ်နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်လာခဲ့တာပါ။ JDB, CQ9 တို့လို့ Developer တွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုရင် Online မှာပဲ Casino ကစားလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Online ကစားတဲ့အခါမှာလဲ Land based casino တစ်ခုမှာကိုယ်တိုင်သွားကစားရတဲ့ အရသာလုံးဝမပျက်စေပဲဖန်တီးထားကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။
Reel3ခုပါတဲ့ Slot တွေကကစားဖို့အတွက်လွယ်ကူပြီးတော့ Jackpot ရဖို့အခွင့်အရေးများပါတယ်။ ဒီကစားနည်းတွေက ရိုးရှင်းပြီးတော့ Theme တစ်ခုစီရှိကြတယ်။ Classic Slot တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆင်တူကြပေမယ့် ကစားသူတွေသတိထားရမှာက ဒီ Slot တွေရဲ့ကစားပုံကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ။ Slot ကစားနည်းတစ်ခုစီမှာ ကိုယ်ပိုင် Symbol တွေနဲ့ ထူးခြားသွားစေတဲ့ Bonus တွေကိုယ်ပိုင်ရှိကြတယ်။
Traditional Slot Machine တွေကဘာလို့မပျောက်ကွယ်သွားတာလဲ?
Online အဓိကအသားပေးတဲ့ Casino ပေါင်းမျိုးစုံက စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ကစားနည်းအသစ်တွေကိုထုတ်ဖို့ အာရုံစိုက်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ကစားသူအချို့က Traditonal Slot တွေကဘာလို့မပျောက်ကွယ်သွားပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒီကစားနည်းတွေက ကစားသူပေါင်းများစွာရဲ့ Rating ကောင်းကောင်းပေးခြင်းခံရပြီးတော့ အထူးသဖြင့်တော့ Online မှာကစားတဲ့အခါ တစ်ကယ့် Casino အတွေ့အကြုံလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေပေါ့!
Traditional Slot တွေမှာ Reel3ခုနဲ့ Payline တစ်ခုပဲရှိတက်ကြတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချို့တစ်လေကတော့ Payline ၅ခုအထိပေးထားတတ်ကြတယ်။ ဒီကစားနည်းတွေက ဒီနေ့ခေတ်သစ်ကစားနည်းတွေလို Feature အလန်းတွေ(Bonus Rounds တွေ၊ Multiplayer တွေ၊ Mini game တွေ..etc) မရှိဘူးဆိုပေမယ့် ကစားသူပေါင်းများစွာရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုခံနေရဆဲပါ။ ဒီစက်‌တွေက Casino တစ်ခုမှာ ကစားရတာလွယ်ကူမှုကြောင့် ကစားသူပေါင်းများစွာ၊ အထူးသဖြင့် Casino ခရီးစဉ်ကို အခုမှခြေလှမ်းစလှမ်းတဲ့ beginner တွေကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိနေဆဲပါ။ Traditional Slot တွေကစားတဲ့အခါမှာ ကစားသူတွေက Symbol တွေ Feature တွေအများကြီးလေ့လာနေစရာမလိုပဲနဲ့ Bet limit ကိုသတ်မှတ်ပြီးတာနဲ့ ခလုပ်နှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် မောင်းတံဆွဲချပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်းပြီးကစားနိုင်လောက်အောင်ကို လွယ်ကူပါတယ်။
Minimum Bets နဲ့ Payout ကောင်းခြင်း
Traditional Slot တွေကဘာလို့ရေပန်းစားလျက်ရှိနေလဲဆိုရင် သူတို့က ကစားလို့အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေမှုကြောင့်ပါ? ဘာလို့လဲဆိုရင် Video Slot တွေမှာဆိုရင် Payline တွေအများကြီးရှိတာကြောင့် ကစားသူတွေကများသောအားဖြင့် Line တွေအများကြီးမလောင်းနိုင်ကြဘူး။ ဒီကစားနည်းတွေမှာကြတော့ Payline နည်းနည်းပဲရှိပြီးတော့ Bonus Round အများကြီးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ကစားရတာပျော်စရာကောင်းပြီးတော့ Payout ကောင်းကောင်းတွေပေးနိုင်ပါတယ်။ Ultra Hot Deluxe လိုမျိုး Traditional Slot မှာဆိုရင် များသောအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးတဲ့ Slot‌ တွေထက်တောင်မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ Payout နှုန်းကောင်းတာကြောင့် ကစားသူပေါင်းများစွာ Traditional Slot တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်လျက်ရှိတာပါ။
Traditional Slot တွေမကစားခင် Bettor တွေက Symbol တွေ၊ ပေါင်းစက်မှုအချို့တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Payout နှုန်းတွေ ကိုလေ့လာဖို့လိုပဲလိုတယ်။ ဒါလေးသိသွားပြီဆိုတာနဲ့ ကစားနည်းကိုလွယ်ကူစွာနဲ့ ပြည့်ပြည့်ဝဝ နားလည်ပြီးကစားနိုင်ပြီ။ ဆိုလိုတာက ကစားသူတွေက ရေရှည်မှာအနိုင်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် ဒီလို Traditional Slot တွေကိုပဲ ပိုပြီးတော့ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာဆို ဒီလို Traditional Slot တွေကိုပဲ Progressive Jackpot တွေနဲ့တွဲလာကြတာကြောင့်ကစားသူတွေကို အရင်းနည်းနည်းနဲ့ပဲ အမြတ်အချီကြီးရစေမှာပါ။
Classic Slot တွေက ကစားသူအသစ်တွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သလိုပဲ Nostalgic ဆန်တဲ့ ကစားသူတွေအတွက်လဲ အသင့်ရှိနေလျက်ပါ။ ဒီကစားနည်းတွေက ဘယ်လောက် Skill ပဲရှိနေတဲ့ ကစားသူဖြစ်ဖြစ်ကစားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Online Casino တိုင်းအလိုလိုပဲထည့်သွင်းပေးထားပြီးတော့ ကစားသူပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ Bankroll ကိုတစ်ဖြေးဖြေးခြင်း Build သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Traditional Slot တွေကိုအချိန်ပေးပြီးဆော့ကြည့်သင့်ပါတယ်နော်!